आफु भन्दा १० वर्ष कान्छा निक जोनसको ९ औं गर्लफ्रेंड हुन् प्रियंका ! – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, असार २४, २०७५१७:०४0
एजेन्सी, ३५ वर्षकी प्रियंका चोपडा अहिले २५ बर्षीय अमेरिकी सिङ्गर निक जोनस संग प्रेममा छिन् । एक रिपोर्टका अनुसार उनीहरुको जुलाई अन्तिम सम्ममा इन्गेजमेन्ट हुने सम्भावना छ । तर यसको पुष्टि भने दुवैले गरेका छैनन् न त उनीहरुको परिवारका सदस्यले नै । यतिबेला उनीहरु एक अर्का संगै समय बिताइरहेका छन् ।
उनीहरुले एक अर्काको परिवार संग समेत भेटिसकेका छन् । यदि उनीहरु प्रेममा रहेको खबर साँचो भए , प्रियंका निकको ९ औं गर्लफ्रेंड हुनेछिन् । यसअघि निकले ८ जना संग प्रेम गरिसकेका छन् । जसमा एक युवती निक भन्दा ८ वर्ष जेठी थिइन् भने अर्की १४ वर्ष । प्रियंका पनि निक भन्दा १० वर्ष जेठी छिन् ।
निकका अघिल्ला प्रेमिका हरुमा चर्चित सिङ्गर्स माईली साइरस र सलेना गोमेज समेत रहेका छन् । प्रियंका र निकको पहिलो भेट मेट गालाको इभेन्टमा अघिल्लो वर्ष भएको थियो । प्रियंका चांडै चलचित्र ‘भारत’ मार्फत बलिउडमा कमब्याक गर्दै छिन् ।
किन मागिन मनिषा कोइरालाको आमाले ऋषि कपूरको फोन नम्बर ?
नायिका करिश्मा मानन्धर एसईई दिँदै, स्कुल ड्रेसमै पुगिन् परीक्षा केन्द्र